international nepal kp koshi death oli hydropower Girl Death politics election
भरोसाका केन्द्रः नेता हुमागाईं
राणा शासन देखि राजतन्त्र अन्त्यसम्मको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको पर्यायजस्तै छ। ७० वर्ष लामो संघर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेसलाई अलग राख्ने हो भने नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको अध्ययन र बुझाइ अपुरो हुन्छ ।
यिनै परिवर्तन संग जोडिएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला र नेपाली कांग्रेसले जन्म दिएका हजारौँ नेतृत्वको सम्झना नगर्ने हो भने काभ्रेली जनताको आस्थाप्रति अन्याय हुनजान्छ । हजारौंमा एक नेतृत्व अथवा परिपक्वताको मोति, युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गर्न सफल एवम लाखौँ युवाहरुको स्वाभिमान व्यक्तित्व हुन् नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग प्रमुख श्री शिव प्रसाद हुमागाईं , २०३६ सालमा विधार्थी आन्दोलनबाट राजनीति शुरु गर्नुभएका हुमागाईले २०४० देखि २०४६ सम्म नेपाल विध्यार्थी संघ जिल्ला सभापतिको रुपमा समेत नेतृत्व सम्हाल्नु भएको थियो । २०४८ देखि २०५१ सम्म काभ्रे क्षेत्र नं ३ को सभापति र जिल्ला सभापतिको भुमिका निर्वाह गर्नुभएका हुमागाईले १५ बर्ष काभ्रे जिल्लामा पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । २०५६ सालमा प्रतिनिधी सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका हुमागाईले २०५९ सालमा केन्द्रीय संगठन विभागको सदस्य सचिव भएर पनि काम गर्नुभएको थियो ।
सानोमा वीपीका बारेमा प्रशस्त किस्सा सुनिन्थे । हामी स्कुल पढ्ने हुँदा नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेको थियो । त्यसैले पनि वीपी सँगसँगै हिँडेको, नजिकबाट चिनेको र वीपी विचारबाट अत्यन्त प्रभावित शिक्षकले हामीलाई पढाउँदा वीपी र उनका विचारबारे भनिररहन्थे । त्यसकारण उनीप्रति सानैदेखि सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । कक्षा उक्लिँदै गर्दा वीपीबारे पढ्ने मौका मिल्यो । वीपीका राजनीतिक जीवन, सिद्धान्त र विचारबारे अध्ययन गर्न थालियो । स्कुले जीवनमा नै वीपीलाई प्रशस्त पढियो । त्यहि संस्कारले हामि युवा आज काभ्रेका विपि समान आदरणीय नेता शिव प्रसाद हुमागाईंज्यूको अनुयायी भएका हौँ ।
एक जमाना थियो काभ्रे पुरै सामाजिक फाँसिवादको घेराबन्दिमा थियो । जनता वर्गहीन समाजको नाममा पक्षपाती समाजको भुमरीमा फसेका थिए । युवाहरुलाई अग्रगामीको नाममा पश्चगामी उन्मुखतिर फसाईदै थियो र यस्ता कयौँ समस्याको चपेटामा परेको काभ्रे आज लोकतन्त्रको सास फेरिरहेका छन् । युवाहरु अग्रगामी संस्कारलाई अगाडी बढाइरहेका छन् । यो परिवर्तनको अभिभारा बोकेको काभ्रे कांग्रेस र नेतृत्व गर्ने आदरणीय नेता हुमागाईं वास्तवमै काभ्रेली जनताको परिवर्तक हुन् ।
नेपाली कांग्रेस काभ्रेको १३औं महाधिवेशनको मतादेश अनुसार संगठनलाई जसरि बलियो बनाउनु पर्थ्यो । त्यसको प्रतिफल २०७४ को निर्वाचनले निराशाजनक बनाएको छ । जिल्लाको ज्वलन्त मुद्धामा पार्टीलाई जोड्न नसक्दा जिल्ला नेतृत्वद्वय आलोचनाका पात्र बनेका छन् । भरोसा योग्य नेतृत्व दिन नसकेकै कारण प्रगतिशिल धारलाई समाप्त पारिदै छ । काभ्रे कांग्रेसबारे आलोचनाका जतिसुकै शब्द खर्चिए पनि कांग्रेसले विरासतमा प्राप्त गरेको लोकतन्त्रवादीको उपाधि उसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । तर यही उपाधिको बैसाखी टेकेर भोलिको कांग्रेस टिक्न सक्दैन । कांग्रेस टिक्ने र टिकाउने विचारले हो । विचार र स्वतन्त्रता कांग्रेसभित्र कति छ भन्ने कुराको समीक्षासहित कांग्रेस र जिल्ला निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्दा मात्र काभ्रे कांग्रेस जीवन्त रहन सक्छ ।
हालै शिक्षक संघ अधिवेशनको परिणामले कांग्रेसभित्रको समीकरणलाई तरंगित गरिदिएको छ। शालिन व्यक्तित्व, सरल स्वभाव र खरो रणनीतिका कारण हुमागाईं काभ्रे कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संरचनामा बलियो सावित हुनुन्छ । वरिष्ठ नेताहरूसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउन सिपालु उनी कार्यकर्ता तहमा पनि लोकप्रिय छन् । युवा पुस्तालाई माया र प्रोत्साहित गर्ने हुमागाईंको नरम शैली र खुला व्यवहारले दिनेश लामा लगायत प्रखर युवा नेताहरू उनीसँगै छन् । योग्यता र प्रतिभा भएको कयौँ युवा समाज रुपान्तरण, देश विकासका लागि अगाडी बढ्न चाहन्छन । देशहितमा समर्पणको बलबाट राष्ट्रको नेतृत्व समाल्न चाहन्छन । युवा पुस्ता अगाडी बढ्न चाहन्छन । अतित र वर्तमानप्रति सही मूल्याङ्कन तथा अस्ताएका वा अस्ताउन थालेका पुस्ताको अनुभवबाट समृद्ध र विश्वसमुदायमा सम्मानित नया नेपालको निर्माण गर्न चाहन्छन । एक पछि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु वर्तमान पुस्ताको अभिभारा, र यो दायित्व निर्वाह गर्न प्रत्येक पुस्ताले आफुले हासिल गरेका सूचना, अनुभव र ज्ञान पनि नयाँ पूस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु नै मुलुकको जित हुनेछ भन्ने संस्कारको लागि संघर्ष गर्ने युवाहर्को अभिभावक आदरणीय नेता शिव प्रसाद हुमागाईं वास्तवमै काभ्रेको भरोसाका प्रतिक हुन्। हामि जस्ता लाखौं युवाहरु नेता हुमागाईं प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ, नमन प्रकट गर्न चाहन्छौ ।
भरपर्दो नेतृत्व पाए कार्यकर्ता अझै दुःख उठाउन तयार छन् । जसरी दोस्रो विश्वयुद्धको सङ्कटको घडीमा ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री चर्चिललाई जनताले साथ दिए । उनको आह्वानलाई पत्याए । किनकि सुन्दर भविष्य चर्चिलले निर्माण गर्छन् भन्ने विश्वास बेलायती जनतामा थियो । राजनीति भनेको मूलतः संस्कारको परिवर्तन पनि हो । कांग्रेस ‘मास बेस्ड’ पार्टी भएकाले पार्टी नेतृत्वमा ‘फेस भ्यालु’ भएकै व्यक्ति चयन गर्न जरुरी छ । कांग्रेसभित्रै भविष्य खोज्ने युवा पुस्ताले समयमै बुझ्न जरुरी छ । जोर जबर्जस्त रूपमा पार्टीमाथि हावी हुँदै आएको अधिनायकवादी सोचलाई परास्त गर्ने क्षमता नराख्ने हो भने हिजो ख्याल–ख्यालमा चुनावी नारा बनाइएको अधिनायकवाद भोलि साँच्चिकै नआउला भन्न सकिन्न । त्यतिबेला पार्टीको आह्वानलाई पत्याइदिने समेत कोही रहने छैनन् । हामि लाखौ युवा आदरणीय नेता हुमागाईं प्रति आग्रहका साथ यो अभिभारा फेरी युवाहरुको भविष्यका लागि, काभ्रेली जनताको सम्बृद्ध जीवनका लागि, काभ्रे कांग्रेसको संस्कार विकासका लागि लिइ दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौ ।
सु–शासन, पारदर्शिता र विधीको शासनका लागि युवाहरुको खबरदारी सदा सर्वदा आवश्यक रहन्छ। जहाँ आवाज कमजोर भयो बुझेहुन्छ विकास ठप्प भयो, परिवर्तन ठप्प भयो । यस कारण पनि परिवर्तनका संवाहक युवाहरुको भूमिका अनन्त छ । यूगान्तकारी परिवर्तन र बिकासको अभिभारा युवाहरुको कुशल काँधमा छ भन्दै जागरणको अभियानमा लम्काउने नेता हुमागाईं विचारमा एकता, नीतिमा एकता, संगठनमा एकता, मूल्य मान्यतामा एकता, संस्कारमा एकता, मुल्यांकनमा एकताको संस्कारलाई अग्रपन्थिमा स्थापित गर्ने वास्तवमै हाम्रा भरोसाका केन्द्र बिन्दु हुन् ।
आउ शिव काभ्रे पुकारिरहेको छ ! ! ! ! !
लेखक प्रविण सापकोटा
नेपाली कांग्रेस काभ्रेका युवा नेता हुन् भने प्रस्तुत लेख लेखकका निजी बिचार हो ।